Ngwa ngwa ọdịnala: Ihe kpatara eji ewu, ihe iji wuo, otu esi akwalite ya | Martech Zone
Anyị ahụla azụmaahịa na-aga nke ọma na ngwa mkpanaka yana azụmaahịa ndị ọzọ na-agba mgba. Ihe kacha mkpa n'ọtụtụ ihe ịga nke ọma bụ uru ma ọ bụ ntụrụndụ nke ngwa mkpanaka wetara ma ọ bụ ndị ahịa. Isi na ọtụtụ ngwa ndị na-agba mgba bụ ahụmịhe onye ọrụ na-adịghị mma, na-ere ahịa oke, na-enweghị uru ọ bara onye ọrụ. Anyị ahụkwala ngwa ngwa ekwentị mkpanaaka dị iche iche ewepụtara mana anaghị anabata ha n'ihi mbọ nkwado na-esighi ike.
Nkwalite ngwa ngwa mkpanaka na-aga n'ihu na-adaba na ọnụahịa ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ yana nyiwe ngwa ngwa mkpanaka. Nke ahụ gosipụtara n’ezie ọtụtụ nsogbu na ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na ugbu a onye ọ bụla na-ebipụta ngwa. Nsogbu bụ na ezughi ego iji mefuo onye ọrụ, ahụmịhe onye ọrụ yana nkwalite… nke na-eme ma ọ bụ mebie ngwa ngwa mkpanaka ahụ.
Ọ ka bụ atụmatụ bara uru itinye ego na ya, naanị ị ga-ahụ ndị mmekọ kwesịrị ekwesị. Ngwa mkpanaka nwere ike melite iguzosi ike n'ihe azụmaahịa ma bulie ahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, anyị wuru ngwa ntụgharị dị mfe maka ụlọ ọrụ kemịkalụ nke nyeere ndị ahịa ha aka ịgbakọ ntụgharị ntụgharị ziri ezi na-enweghị isi laghachi na desktọọpụ ha. Ma, n'ezie, ngwa ahụ nwere njirimara pịa-ịkpọ nke mere ka ha nwee ike ịkpọ onye ahịa anyị maka enyemaka ma ọ bụ nye iwu.
18% nke ndị na-ere ahịa 500 kacha elu na UK na ihe karịrị 50% na US na-enye ndị ahịa ngwa azụmahịa. Na ọkara nke ndị ọrụ mkpanaka na-atụgharị na ngwa iji mee mkpebi ịzụta, ụdị ga-ewepụta oge iji mụọ mkpa ndị ahịa yana mepụta ahụmịhe ngwa nke na-egbo mkpa ndị ahịa. Mana tupu ịmalite ngwa ngwa ọzọ gị, enwere ụfọdụ isi ihe ị ga-ebu n'uche.
Igodo ndị dị mkpa sitere na infographic ọhụụ kachasị ọhụrụ:
Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-eji ngwa mkpanaka na-ewepụ ngwa n'ihi na ha enweghị mmasị
30% nke ndị na-eji ngwa mkpanaka ga-eji ngwa ọzọ ma ọ bụrụ na ọ na-enye ego
2 / 3rds nke ndị ọrụ mgbasa ozi mkpanaka gburugburu ụwa na-ele nghọta anya dị ezigbo mkpa
54% nke ọtụtụ puku afọ n'ụwa niile na-ekwu na ahụmịhe mkpanaka na-adịghị mma ga-eme ka ọ ghara ịdị ha mfe iji ngwaahịa ndị ọzọ na-azụ ahịa.
Gụkwuo banyere imepụta ngwa ngwa ngwa mkpanaka kacha mma na free Usablenet Eduzi ka ngwa egwu.
Tags: mobile ngwamobile ngwa nkuchimobile ngwa ahụmahụmobile ngwa usabilityekwentị mkpanaaka ojiji